Okulindelekileyo kutyalo-mali lwakho lokuThengisa | Martech Zone
Okulindelekileyo kutyalo-mali lwakho lokuThengisa
NgoLwesine, uJuni 20, 2013 NgoLwesine, uJuni 20, 2013 Douglas Karr
Besineentlanganiso ezimbini ezintle izolo, enye ibinomthengi kwaye enye inethemba. Zombini iincoko zazingqonge ulindelo kwimbuyekezo kutyalo-mali lokuthengisa. Inkampani yokuqala ubukhulu becala yayi ngumbutho wentengiso ophumayo kwaye eyesibini yayiyinkampani enkulu exhomekeke kwintengiso yedatha kunye nokuphendula ngokuthe ngqo kweposi.
Yomibini le mibutho yaqonda, phantsi kwedola, indlela uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa olusebenzela bona. Umbutho wentengiso uqonde ukuba, ngomthengisi ngamnye oqeshiweyo, banokulindela ukonyuka okubonakalayo kweendlela ezivaliweyo. Umbutho wesibini uqala ukubona ukuncipha kwembuyekezo kwintengiso ethe ngqo njengoko beqhubeka nokulungisa imizamo yabo. Bayaqonda ukuba ithuba lokuhamba kwi-Intanethi.
Eyona nto iphambili kuyo yomibini le mibutho kubeka ulindelo kwindlela iinzame zabo zokuthengisa ezinokubuya ngayo nemizamo yethu Iarhente yentengiso engenayo. Ngokunikwa eli thuba, ndicinga ukuba iiarhente zentengiso ezingenayo ngenxa yokungasebenzi kwiinkampani ezininzi ngokumisela ulindelo olubi. Rhoqo, bakholelwa ukuba ukuba umthengi unohlahlo-lwabiwo mali - bayayifuna.
Esi sisicwangciso esibi. Sele siyikhankanyile loo nto Ukuthengisa ngaphakathi kuxhomekeke kukuxhomekeka, kodwa zikhona ezinye iindlela ezisebenza kakuhle kakhulu kwaye zinembuyekezo esemthethweni kutyalo-mali.
Umzekelo, ukuba umthengi usixelele ukuba banolwabiwo mali olunomda kwaye bafuna ukwakha ibango kwangoko ukuze bakwazi ukukhulisa inkampani yabo, siza kubanyanzela ukuba bahlawule ngakumbi ngokucofa. Abathengi bethu basebenzisa Umphumo yale. Ramp up and optimisation ziyakhawuleza kwaye abantu kwi-Evereffect basebenza ngokukhawuleza ukufumana umthengi kwiziphumo eziqikelelweyo. Iindleko zokhokelo zinokuphakama, kodwa impendulo kunye neziphumo zintle kangangokuba ziyamangalisa. Ixesha elingaphezulu, ukuba umthengi usebenza nathi kwizicwangciso zentengiso ezingenayo, banokusebenzisa ukuhlawulwa okuhlawulelweyo kweemfuno zonyaka okanye ukunyanzelisa ukuthengisa xa kufuneka bonyuse ukukhula ngaphandle kwemida yezinye iindlela.
Umsebenzi wentengiso ephumayo ungummangaliso, kodwa kuthatha ixesha ukunyusa umqeshwa. Sibona ukuphuma kukwenza ngokungummangaliso kakuhle-ngokuhamba kwexesha- xa iindibano ezinkulu zifuna ukukhuliswa kunye nobuchule bomcebisi omkhulu wophuhliso lweshishini. Ngelishwa, nangona kunjalo, umntu ufikelela kumda ophakamileyo… kwaye xa besenza, kuya kufuneka uqeshe kwaye uqeqeshe abantu abathengisayo. Kwakhona, asiyijongeli phantsi impembelelo yengcali ephumayo yokuthengisa. Sizama ukubeka ulindelo.
Intengiso ihlala inexabiso eliphantsi kunye nembuyekezo ephantsi kolo tyalo mali. Nangona kunjalo, intengiso ihlala inegalelo ekuqondeni uphawu kwaye inokunceda ekuthengiseni. Asichasani nentengiso, kodwa ukuba ibango kunye nomgangatho wezikhokelo kufuneka uphakame, sinokucebisa abathengi bethu ukuba batyale imali kwezinye iindawo.
Intengiso engenayo esebenzisa isicwangciso esisebenzayo somxholo siyinto eyahlukileyo kwaye ibambe ukuthandwa ngenxa yempembelelo ephezulu kunye neendleko eziphantsi kwokhokelo ngalunye. Nangona kunjalo, ayisiyomvelisi wemfuno kwangoko. Izicwangciso zomxholo ezisebenzisa zombini iindlela zokukhangela kunye nezentlalo zihlala zithatha ixesha ukwakha amandla. Kuba ngumzamo oqhubekayo, inkampani idibanisa iziphumo ekuhambeni kwexesha. Oko kukuthi, njengoko unikezela umxholo namhlanje, umxholo owubhalileyo kwinyanga ephelileyo usasebenza ukuqhuba kukhokelela kuwe.
Kananjalo, izicwangciso zentengiso ezingenayo zinokubonelela ngamathuba okufumana amanqaku okuqonda ngcono izikhokelo ezifanelekileyo ezivela kwezi zinomtsalane. Intengiso engenayo inokubonelela ngolwazi olongezelelekileyo kwiqela lakho eliphumayo ukuze ube nobukrelekrele malunga nenjongo yethemba. Ukuqonda oko babekufunda, into ababeyikhangela kunye nokufakwa kwedatha yefom banokulungiselela kwaye bavale izikhokelo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Isigqibo sokutyala imali kwintengiso engenayo sisandi esivakalayo ukuba unesicwangciso esifanelekileyo kunye nezixhobo zokuziqhuba ngokufanelekileyo. Oko akuthethi ukuba sisigqibo esifanelekileyo kuyo yonke inkampani kuwo onke amabakala, nangona. Ngokunikwa izibonelelo ezinqongopheleyo kunye neemfuno ezahlukeneyo, unganqwenela ukusasaza uhlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo kwezinye iindlela. Ubuncinci okwangoku!
tags: buyela kutyalo maliROI
IPenguin 2.0 Uhlala njani kwicala elilungileyo likaGoogle
Ukuphendula ngokuchasene noyilo lwe-imeyile olushukumayo
Juni 20, 2013 ngo-9: 15 AM
Ndiyabulela ngale nto. Ukuhlawula ngokucofa ngokuqinisekileyo yindlela yokuhamba ukuba kukho imfuno ekhawulezileyo kodwa zikho ezinye iindlela ngokunjalo, hayi?